Umenzeli Wokuhlobisa Amanzi CW-05
Umenzeli we-Decoloring CW-05 usetshenziswa kabanzi kunqubo yokukhipha umbala wamanzi angcolile.
I-DADMAC ingumsulwa ophakeme, uhlanganisiwe, usawoti we-quaternary ammonium kanye ne-high cense density monomer comeric. Ukubukeka kwayo kuketshezi olungenambala nolusobala ngaphandle kwephunga elicasulayo. I-DADMAC ingahlakazeka emanzini kalula. Ifomula yayo i-C8H16NC1 kanti isisindo sayo samangqamuzana ngu-161.5. Kukhona i-alkenyl bond ephindwe kabili esakhiweni samangqamuzana futhi ingakha i-homo polymer eqondile nazo zonke izinhlobo zama-copolymers ngokusabela okuhlukahlukene kwe-polymerization.
I-PAM-Nonionic Polyacrylamide isetshenziswa kabanzi ekukhiqizeni izinhlobo ezahlukahlukene zamabhizinisi ezimboni kanye nokwelashwa kwendle.
I-Polyamine isetshenziswa kabanzi ekukhiqizeni izinhlobo ezahlukahlukene zamabhizinisi ezimboni kanye nokwelashwa kwendle.
Lo mkhiqizo usebenza kahle kakhulu ngezinto ezingaphili ze-polymer coagulant. Inkambu Yokufaka Isicelo Isetshenziswa kabanzi ekuhlanzweni kwamanzi, ekwelashweni kwamanzi angcolile, ekujutshulweni ngokunemba, ekukhiqizweni kwamaphepha, embonini yezemithi nakumakhemikhali ansuku zonke. Inzuzo 1. Umphumela wayo wokuhlanza kumazinga aphansi okushisa, ukushisa okuphansi kanye namanzi aluhlaza angcolile kakhulu ungcono kakhulu kunamanye ama-flocculants ephilayo, futhi, izindleko zokwelashwa zehliswa ngama-20% -80%.
Umkhiqizo uyinhlanganisela engaphili ye-macromolecular. Kuyimpuphu emhlophe noma uketshezi olungenambala. Inkambu Yesicelo Ihlakazeka kalula emanzini nge-corrosion.Iyasetshenziswa kabanzi njengesithako semithi yokwelapha kanye nezimonyo ze so so (ezifana ne-antiperspirant) embonini yamakhemikhali yansuku zonke; amanzi okuphuza, ukwelashwa kwamanzi angcolile ezimboni.
I-coagulant yenkungu kapende yakhiwa i-ejenti A & B. I-Agent A ingolunye uhlobo lwamakhemikhali okwelashwa okukhethekile asetshenziselwa ukususa i-viscosity yepende.
I-Heavy Metal Susa Agent isetshenziswa kabanzi ekukhiqizeni izinhlobo ezahlukahlukene zamabhizinisi ezimboni kanye nokwelashwa kwendle.